ရခိုင် လူမှုကွန်ရက်များ ဖွဲ့စည်း | ဧရာဝတီ
ရခိုင် လူမှုကွန်ရက်များ ဖွဲ့စည်း
ငြိမ်းချမ်း| December 17, 2012 | Hits:1,025
0 | | ရခိုင် လူမှု ကွန်ရက် ညီလာခံ (ဓာတ်ပုံ – ငြိမ်းချမ်း / ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ကျင်းပသော ၁၈ မြို့နယ် ရခိုင် လူမှုကွန်ရက် ညီလာခံမှ ၄ ခရိုင် ရခိုင် လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်သည် ပြည်သူ့ ကောင်းကျိုးအတွက် ဆိုပါက ထောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့မဟုတ်ပါက ပြည်သူနှင့် တသားတည်း ၁၈ မြို့နယ်လုံး တညီတညွတ်တည်း ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ရခိုင် လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ညီလာခံဖြစ် မြောက်ရေး အဖွဲ့မှ ကိုသန်းလွင် က ပြောသည်။
“အစိုးရ လုပ်ဆောင်ချက်က ပြည်သူတွေအတွက် နစ်နာတယ်။ ပြည်သူတွေ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် ကန့်ကွက်မယ်”ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ရခိုင် လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ ခရိုင် ခေါင်းဆောင်များ အဖြစ် သံတွဲ ခရိုင်မှ ဦးစိုးဝင်း၊ ကျောက်ဖြူ ခရိုင်မှ ကိုသိန်းထွန်းအေး၊ စစ်တွေ ခရိုင်မှ ဦးကျော်စောဦး နှင့် မောင်တော ခရိုင်မှ ကိုအောင်မျိုးထွန်း တို့ကို ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းညီလာခံကို တောင်ကုတ်မြို့ ကိုင်းရှည်ကျေးရွာ စေတျာရာမ ကျောင်းတိုက် ဓမ္မဗိမာန်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက် တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၇ မြို့နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအ၀င် မြို့နယ် ၁၈ မြို့နယ်မှ ကိုယ်စာလှယ်များ၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ဖိတ်ကြားထားသည့် လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တောင်ကုတ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) မှ ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း အင်အား ၈၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ထို ကွန်ရက်အဖွဲ့မှ ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နယ်မြေလု ခိုးဝင်ကျူးကျော်လာသူများ နှင့် ဒေသခံများအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သော အရေးအခင်းအပြီး ခိုးဝင်လာသူများ ရှိကြောင်း၊ ယင်း ခိုးဝင်လာသူများကို ဒေသခံ တိုင်းရင်း သားများ၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး ပြန်လည် နေရာချထားခြင်းသည် ပဋိပက္ခများ ထပ်မံ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အခြေ အနေ ရှိနေသဖြင့် ပြန်လည် စဉ်းစားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရောက်ရှိနေသည့် INGO, NGO အဖွဲ့များက ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများအတွက် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရာတွင် ဤကွန်ရက်မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ရခိုင် ဒေသထွက် သယံဇာတ များ ကို ထုတ်ယူသုံးစွဲရာတွင် ပြည်သူလူထုအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ပြန်ပေးရန်၊ ဒေသခံပြည်သူလူထု အတွက် မျှဝေသုံးစွဲရာ တွင် မျှတမှုရှိမရှိ ကွန်ရက်မှ ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ ပါဝင်ပြီး လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပြည်တွင်းစစ်ကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ပေးရန် တို့လည်း ကြေ ညာချက်၌ ပါဝင်သည်။
ညီလာခံသို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေးစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၊ ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ(ALP) နှင့် စစ်တွေ လူမှုကွန်ရက်မှလည်း သ၀ဏ်လွှာများပေးပို့ကြောင်း ညီလာခံ တက်ရောက်ခဲ့သော ခိုင်အောင်စိုးသန်းက ပြောသည်။
“ဒီလိုညီလာခံလုပ်တာ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာတရပ်ပါ။ ညီလာခံထဲမှာတော့ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်ထဲမှာ ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေပဲ ပေါ်လာ ပေါ်လာ ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ မြို့နယ်တိုင်းက ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီးတော့ လုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်သွားနိုင် အောင် ဆွေးနွေးကြပါတယ်”ဟုလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ဒိန်းမတ် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံရှင်းလင်း
ပျောက်ဆုံး မြန်မာစစ်သား ၃ ဦးအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒေသခံများကို အကူအညီတောင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအတွင်း နောက်ကွယ်မှ မပါခဲ့ကြောင်း အစိုးရ ထုတ်ပြန်ပေးရန် MSF တောင်းဆို
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် လုံခြုံရေး ပိုဂရုစိုက်လာ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment si thu December 18, 2012 - 1:10 pm	ပုဇွန်ဦးနှောက်လောက်ရှိတဲ့ အာဏာရူးလူတွေက တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကို ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ စစ်အစိုးရကိုပိုကြိုက်တယ်။ ဒီမိုကရေစီက ဘယ်ဆီနေမန်းမသိ လူတွေကပွဲလုပ်နေကြတယ်။
Reply	swe htwe December 18, 2012 - 11:43 pm	It isagood idea. INGO and UN’s intention should be watched.
အကူအညီတွေ ပြည်သူတွေဆီ ရောက်ဖို့လို
UNICEF ရဲ့ အယ်ဒီတာ့ထံ ပေးစာ
ရခိုင်တွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များ ပြန်လည် ရောက်ရှိ
အသင်းအဖွဲ့ ဥပဒေကြမ်း ပြင်ဆင်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်
ကလေးစစ်သားဟောင်းများ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ILO ဆောင်ရွက်မည်
မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ဆေးကုသည့် နိုင်ငံခြားသား ဆရာဝန်များကို အရေးယူမည်